musha nyika dzakabatana WWE Superstars John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Yedu John Cena Biography inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana / Wife kuva, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, ichi Chinyorwa cheHupenyu cheiyo WWE Nhoroondo. Zvakare, kurodza yako autobiography chishuwo, isu tine pfupiso yakakwana yeJohn Cena's Bio - kubva pamazuva ake ehudiki kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake ekutsungirira kwehunhu mumhete yekurwa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga John Cena Bio iyo iri inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
John Cena akaberekwa musi we 23rd weApril 1977 muWest Newbury, Massachusetts, USA Akazvarwa kuna amai vake, Carol Cena (hafu yeChirungu neFrance -Canada) uye kuna baba vake, John Cena Sr. (vanobva kuItaly).
Sekureva kwaJohn Cena Sr, Kuberekwa kwaMwana John kwaive kweimwe yezviitiko zvisingawanzoitika kana vacheche vachiendeswa nembilical tambo yakaputirwa pamitsipa yavo, mamiriro anotyisa ayo angangotungamira kumatambudziko ekuberekwa. Nekudaro, John akapona kuberekwa mune chimwe chidimbu uye nekuwedzera, akakunda kurwa kwake kwekutanga mumhete yechisikigo.
Taura nezvekurwira kwake kwakawanda mumashure chaiwo, yaive kuravira kwakawanikwa kwaJohn John sezvo zvaifarirwa nababa vake zvaitora vanakomana vake kuti vaone World Wrestling Federation Matches kuBoston Garden. Kunyangwe Mudiki John akanakidzwa nekurwa uye akateedzera nyeredzi dzeWWF (sezviri kuratidzwa pazasi), akange asina chishuwo chekubatanidzwa mumakwikwi ehupenyu. Kushaya kwake kufarira mumutambo uyu kwakamuita kuti asiyane naJohn Cena Sr uyo aisada chete mutsimba asi aida kuve chikamu chechiito.
Chikoro chakaita basa razvo pakufumisa Young John uyo akakwidziridzwa chechiKaturike kune zvinangwa kunze kwekurwa. Paakapedza dzidzo yake yekutanga, akanyoresa Central Catholic High School muLawrence kwaakagadzirira kufarira Baseball. Pashure pacho, akaendeswa kune chikoro chebasa, Cushing Academy uko kwaakange asina kungoita unyanzvi muBhola asi akanga achitsvaka chinangwa chakakwirira chinokodzera zvakashata zvake.
Kuti apedzisire, Young John akanyora kupinda Springfield College kuMassachusetts kwaasina chete kuwana dhigirii mukufunda maitiro ekushandisa hasha dzake kune zviitwa zvine hutano (kurovedza muviri) asi akabatanidzwa zvakanyanya mu koreji nhabvu seboka sezvinoratidzwa pasi apa (3rd kubva kuruboshwe pa 2nd row). Mukuwedzera, akaramba achiwedzera chido chekuvaka muviri.
Achangobuda mukoreji muna 1999, kupona kwaJohn kwakarova mukati pamwe nechishuwo chakasimba chekuve mumwe munhu. Nekudaro, aine madhora mazana mashanu chete muhomwe yake, akaenda kuCalifornia kunoteedzera kuda kwake kwekuvaka muviri asi akazoputsa mavhiki maviri akatevera.
Mari yake yakadzikira yakamuita kuti afunge nezvekuwana raramo nekutora basa munzvimbo yechitoro yeGym yeGym yakakurumbira muVenice uko Arnold Schwarzenegger aimbove nekushanda panguva yehudiki hwake. Paive paGym imwechete John mudiki akasangana nemuvaki wekuvaka uyo akataura naye kuti atore dzidziso kuUltimate Pro Wrestling (UPW), yaimbove kambani yeWorld Wrestling Entertainment inosimudzira kambani.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Mushure mekutevedzana kwekudzidziswa kuUkupedzisira Pro Wrestling (UPW), John akapihwa chinzvimbo chemu-mhete chakamuona achifungidzira sememi-robhoti anozivikanwa sePrototype uye akabata zita reUWW muna 2000.
Mugore re2001 akasaina chibvumirano chekushanda paOhio Valley Wrestling uko akawana zita reOVW heavyweight munaFebruary 2002, asati agadzira WWE yake yekutanga muna June. Makore maviri gare gare, akatora United States Championship. Kubvira panguva iyoyo haana kutora zvakawanda zvakakunda uye mazita uye akaita kuti baba vake vave chikamu chechiito chaaida nguva dzose. Vamwe vose sezvavanotaura nhoroondo.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Pakati pegore 2002 kusvika 2018, John akange aine stints neanoverengeka anonakidza echikadzi hunhu hunosanganisira, American Wrestlers; Mickie James, AJ Mendez, Lisa Marie Varon naBarbie Blank. Chokwadi, John ndiye asingangodi basa rake chete asi anoziva nzira yekukwikwidzana nevakadzi vake vehunyanzvi.
Basa rake rinoita kuti upenyu huve nehupenyu hwakakonzera kukanganisa kwekuroorana kwake kwekutanga kuchikoro chake cheku High school uye kwete mudzimai mukuru, Elizabeth Huberdeau. Zvose zvakaonekwa zvakanaka uye mushure mekuroorana kwavo (yakabatwa ne 11th yaJuly 2009).
Zvisinei, vaviri ava vakamhan'arira kurambana makore matatu apfuura Muna Chivabvu 3 iyo yakazadzikiswa muna Chikunguru 2012. Achitaura nezve zvikonzero zvekurambana, John akaburitsa pachena kuti kurasikirwa kwake kuWrestleMania mumaoko eThe Rock kwakakurudzira maitiro akamutungamira kunyorera. kurambana nemukadzi wake wekutanga.
"Mutambo iwoyo wakatumira hupenyu hwangu kupinda mutsara, zvose zvepamusoro uye pachedu, nokuti ndakanga ndisingakwanisi kupfuurira kushushikana kwangu nekuti ndakanga ndakundikana,"
John akaenderera pagore rimwe chetero kuhukama hwepamoyo nemumwe mukadzi wechikadzi, Nikki Bella waakange apfugama nebvi rimwe ndokukumbira kuzotevera Wrestlemania 33. Panguva yepositi iyi, Nikki naJohn vari kuroorwa uye vachazoroora. munguva pfupi kunyange hazvo marongero emuchato asingazivikanwe.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
John cena akarerwa katurike mumhuri ye7. Gara shure apo tinokuudza mashoko echokwadi emhuri yake.
Baba: Baba vaJohn, John Cena Sr anozivikanwa zvakare saJohnny Fabulous ndiye mushamarari weChaotic Wrestling (CW), pamwe nemumiririri weEast Coast Championship Wrestling (ECCW).
John akawana ukama hwepedyo nababa vake apo paakasarudza kuvaka basa mukurwisana. Vaviri vave vari pedyo kubva ipapo uye vatsigirana. Pane imwe nguva, John akagadzira hurongwa hwehutano hwekubatsira baba vake kurasikirwa neA50 mapaundi ekurema.
Amai: Amai vaJohn; Carol cena ndeyehafu yeChirungu uye French-Canada madzitateguru. Kunyangwe iye asina kufarira zano rekuti John ave nyanzvi yekurwa, iye zvakadaro akamutsigira uye vakagara zvakanaka.
Hanzvadzi konama: Stephen Cena ndiye mukoma mukuru waJohn Cena. Iye zviri pachena ngochani uye anoshanda iyo twitter mubato: @thatstevecena.
Hanzvadzi konama: Matthew Cena ndiye munin'ina waJohn uyezve muvaki wemuviri. Akaedza kutsika nzira yaJohn nekupa mutsimba bara asi haana kubudirira pairi.
Others: Vamwe vese vanun'una vaJohn (hama) vanosanganisira Daniel Cena naSean Cena. Pakave pasina ruzivo rwakanyanya pamusoro peavo vaviri vakasarudza kurarama hupenyu hwega.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Career Facts
John cena akawana kubudirira kukuru mubasa rake rokurwisana kubvira paanosangana naye mu (1999-2001, 2003). Tinokuunzira imwe yekubudirira kunoshamisa kusingaverengeki.
Akatora OVW Heavyweight Championship kwemwedzi mitatu IN 2001 mushure mokunge asayina WWF uye akaendeswa kumunda waro unokura Ohio Valley Wrestling (OVW).
Muna 2006, John akapinda muchiitiko chikuru chekuparadzanisa Mutambo mutsva paNew Year's Revolution iyo yakakunda mushure mekurwa kwehondo.
Pakati pa2008-2010, John akapinda muWorld Heavyweight Champion uye akaita chishamiso kudzoka semutambi wekupedzisira mumutambo weRoyal Rumble, kuhwina mutambo nekupedzisira kubvisa Triple H.
John Cena iye zvino anowirirana naRic Flair yeWorld Most Victory muWWE nhoroondo ne 16 kutonga.
Akakunda WWE Championship 13 nguva uye World Heavyweight Championship 3 nguva.
John Cena Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Chokwadi
Haana vana nokuti haana chokwadi chekuva baba vakanaka.
Anonyora kuruboshwe rwakapiwa.
"Usamborega" pamwe ne "Hustle, Kuvimbika, Kuremekedza" ndiwo maitiro ake etsika.
John cena haasi iye chete mutsimba. Ane dzimwe nguva dzebasa rake rehunyanzvi dzakatora nguva kubva pamabatirwo ake akabatikana ekuratidzira mumafirimu anosanganisira "The Marine" (yake yekutanga) pakati peanopfuura gumi mamwe mafirimu anonakidza.
Iye ane chipo murapi ane 2005 album "Iwe Haugone Kundiona" yakatanga paNo. 15 pane Billboard 200 machati.
Akanyanyobatanidzwa mune rudo.
Tinokutendai nekuverenga yedu John Cena Yemwana Nhau uye Untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure zvako kana kuti tibate!
Dai 11, 2021